Hogaamiyaha sare ee xisbiga talada haya ee jasiirada taiwan oo is casishay – Radio
Hogaamiyaha sare ee xisbiga talada haya ee jasiirada taiwan oo is casishay
November 25, 2018	68	Like
Madaxweynaha Jasiirada Taiwan ahna hogaamiyaha Xisbiga talada haaya ee Jasiirada sheegata in ay shiinaha ka madax banaantahay ee Taiwan marwada lagu magacaabo Tsia Ing ayaa iska casishay hogaaminta xisbigaasi.
Madaxweyne Tsia ayaa sheegtay in ay isku casishay sababa la xiriira doorashada dhexe ee Jaziiradaasi oo ay rajo fiican ka qabtay balse ay usoo baxday in sida ay fileysay aynan ax noqon oo ay ku fashilmeyn.
Maalinimadii shaley aheyd ayey iyada oo matalaysa xisbiga talada haaya Jaziiradaasi ayey dhiibatay codkeeda iyadoo sheegtay in go’aanka kama dambeysta ah uu noqon doono mid ay ku farxaan si kasta oo uu ahaadaba maadama ay ku kalsoontahay sida ay sheegtay codka shacabka Taiwan.
Xisbiga kale ee Shiina sida hoose u taageera ee Mucaaradka ah ayaa u muuqda in natiijo fiican uu kasoo hoyiyay doorashada xiliga dhexe ee Taiwan.
Maamulka Gobolka Banaadir, isagoo ka falcelinaya qoraalka kasoo baxay shaqsiyaad ka mid ah Guddi Hoosaadka ...